CENI: Tsy nampiova ny vokam-pifidianana ny fisian'ny laharana kara-panondro mitovy
jeudi, 19 mars 2020 16:40
Taorian'ny savorivory nateraky ny fanambaran'ny Filoha lefitry ny CENI, izay efa nametram-pialana, momba ny fisian'ny fitovian'ny laharana karapanondro amin'ny mpifidy maherin'ny 1 tapitrisa ao anatin'ny lisitry ny mpifidy, dia nampiantso ny solo-tenan'ny antoko politika, ny fikambanana misehatra amin'ny fanabeazana olom-pirenena, sy ireo mpanara-maso ny fifidianana, ary ireo solotenan'ny masoivoho sy fikambanana mpamatsy vola ny Vaomiera mahaleo tena momba ny fifidianana na ny CENI androany maraina alakamisy 19 marsa 2020, tao amin'ny Foibe-toerany tao Alarobia.
Nanazava momba ny fanamboarana sy ny fanamarinana ny lisitry ny mpifidy. Nitondra fanazavana izy ireo momba ny tantaran'ny lisi-pifidianana, izay mbola natao tanana avokoa teo aloha, ary ny taona 2013 dia nisy ny fanavaozana izany lisitra izany, izay natambatra tamin'ny lisitra tany aloha.
Niangona tao hatrany anefa ireo tsy fanjariana, na dia efa nisy ezaka fanatsarana, fanadiovana ireo anarana na laharana karapanondro miverimberina.
Nanamafy moa ireto biraon'ny CENI ireto fa efa nisy ny fitsirihina nataon'ny OIF izay nanambara fa azo anaovana fifidianana ireo tsy fanjariana maivana ireo, satria ny tanjona dia ny tsy fahafahan'olona iray mifidy indroa, nefa kosa tsy fanafoanana ny zon'ny olona iray hafa hifidy na dia mety manana laharana karapanondro mitovy aminy aza any an-kafa.
Voalazan'ny CENI moa fa efa nanao tatitra momba io tranga io izy ireo tamin'ireo mpanao politika sy mpisehatra rehetra momba ny fifidianana, ary tsy vao izao io tranga io no misy. Ny lalàna sy ny fomba fiasa anefa no lasa sakana tsy anamboarana io tsy fanjariana io, satria dia tsy misy foibe fanomezana laharana momba ny karapanondro,fa ny any amin'ny distrika no samy mandrafitra ny azy.
Nanosi-kevitra moa ny CENI ny anaovana ny lisitry ny mpifidy ho biometrika, ka dia ho azo antoka kokoa ny tsy fisian'ny fiverimberenan'ny anaran'ny mpifidy na ny laharana kara-panondrony.
Tamin'ny fandraisam-pitenenan'ireo nantsoina andray anjara amin'izao dinika izao, dia samy nanamarika ny rehetra fa ny soram-piankohonana mihitsy no mila jerena, ary nangatahana ny amoahan'ny CENI, na dia amin'ireo mpisehatra momba ny fifidianana ihany ny lisitr'ireo olona 1 tapitrisa manana laharana karapanondro mitovy ireo, na farahafaharatsiny, taiza avy no nisy ireo tranga ireo.
Samy nanamarika ny rehetra fa mila fitokisana ny vahoaka sy ny mpifidy, ka mila ezaka lehibe hiverenan'izay fifampitokisana izay.